‘यो ज्योति परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठामा बलात्कार भयो' -
२५ कार्तिक २०७६, सोमबार ०२:२६ 100 पटक हेरिएको
काठमाडौँ – जिल्ला अदालत काठमाडौँले ठगी आरोपमा पक्राउ परेको व्यवसायी रुप ज्योति र उनकाे छाेरीलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । आइतबार अदालतमा म्याद थपका लागि उपस्थित गराइएका उनीहरुलाई ५ दिनको समय थपरे अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको इजलास नम्बर १० मा दिउँसो करिब साढे ३ बजे पूर्व अर्थ राज्यमन्त्रीसमेत रहेका व्यवसायी रूप ज्योति र उनकी छोरी सुरुचिलाई पुर्‍याइएकाे थियाे। बिहान ११ बजे प्रहरी हिरासतबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पुर्‍याइएका ज्योति बाबुछोरीको कार्यालयमा बयान सकिएपछि म्याद थपका लागि जिल्ला अदालतमा लगिएको थियो।
प्रहरी भ्यान चढेर अदालत पुगेका ज्योति बाबुछोरी न्यायाधीशअघि खडा भएका थिए। न्यायाधीश ओमप्रसाद आचार्यले ज्योति बाबुछोरीको नाम लिएपछि उनीहरु न्यायाधीशका अगाडि खडा भएका थिए।
न्यायाधीश आचार्यले ज्योति बाबुछोरीलाई पहिलो प्रश्न गरे, ‘कहिले कहाँबाट पक्राउ पर्नु भयो?’
‘अस्ति बिहीबार एयरपोर्टबाट,’ ज्योति जवाफ फर्काउँछन्।
‘पक्राउ पुर्जी पाउनुभयो?’ न्यायाधीशको आचार्यको दोस्रो प्रश्न थियो। ‘पाइयो श्रीमान्, तर किन पक्राउ गरिएको हो थाहा भएन,’ ज्योतिले जवाफ फर्काए। न्यायाधीशले लगत्तै जवाफ दिए, ‘पक्राउ पूर्जी पढ्नुस्। सबै त्यहीँ लेखेको हुनुपर्छ।’
त्यसपछि करिब ७ मिनेट जति व्यापारी ज्योति एक्लै बोलिरहे। ‘श्रीमान् ठगी आरोप लगाइएको छ। तर मैले कहाँ ठगी गरेँ श्रीमान्? अचम्मको कुरा आयो। ठगी आरोप लगाइएको ल्यान्डमार्क आफ्नो नाममा नरहेको र सेयरसमेत नरहेको दाबी गर्दै उनले सुनियोजित रुपमा फसाउन खोजिएकाे बताए।
आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै ज्योतिले भने, ‘यो ज्योति परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठामा बलात्कार भयो। श्रीमान् न्याय पाउँ? आरोप लगाएको कम्पनीमा हाम्रो कुनै सेयर छैन। लगानी पनि छैन।’
‘यो सरासर षड्यन्त्र गरेर फसाउने योजनाका साथ उजुरी हालिएको हो,’ ज्योतिको दाबी थियो। हिरासतमा राखेर अन्याय भएकाले साधारण तारेखमा छाडनु पर्ने उनको आग्रह थियो। यसअघि पनि न्यायाधीशसामु आफूमाथिको आरोप झुठो बताउँदा रूप ज्योतिले न्यायाधीशबाट कुनै वास्तै नभएको बताएका थिए। ‘यो कस्तो राज्य हो?’ ज्योतिले प्रतिप्रश्नसमेत गरेका थिए।
व्यापारी ज्योतिको कुरा सुनेपछि केही आक्रोशमा आएका न्यायाधीश आचार्यले ज्योतिलाई भने, ‘के भन्नुभयो? तपाईको प्रमाण अनुसन्धान अधिकारीसामु पेस गर्नुहोस्। न्यायाधीशले कुरा सुनेन भन्न मिल्छ?
त्यसपछि निरीह देखिएका ज्योतिले नरम भाषामा जवाफ फर्काए, ‘म कानुन जान्दिनँ श्रीमान्! गल्ती भयो, माफ पाउँ!’
त्यसपछि न्यायाधीश आचार्यले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका पाटाहरु पढेर सुनाएका थिए, ‘तपाईको मोबाइल कल डिटेल, बैंक स्टेटमेन्ट, कम्पनीको कारोबार शेयर लगायतका विषयमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छ। जसका लागि ७ दिनको म्याद मागिएको छ।’
त्यसपछि ज्योतिले आफू नभाग्ने भन्दै साधारण तारेखमा छुट्नुपर्ने माग राखेका थिए। म सिंगापुर भएको मान्छे। यही कुरा फेस गर्न भनेर म आएको हो। मेरो अमेरिका बस्ने छोरीलाई नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर मैले बोलाएको हो। म भाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन। साधारण तारेखमा रिहा हुन पाउँ’ ज्योतिले अनुनयको भाषामा भने।
बाबुले यी सब कुरा राखिरहँदा छोरी सुरुचि भने एक शब्द पनि बोलिनन्। त्यसपछि न्यायाधीशले तपाईको कुरा बुझेँ भन्दै उनीहरुलाई बस्न आग्रह गरेपछि बायाँ छेउको बेन्चमा बाबुछोरी गएर बसे।
त्यसपछि रूप ज्योतिका वकिलले ‘श्रीमान् यही विषयमा केही कुरा राखौं’ भन्दै अनुमति माग गरी साधारण तारेखमा छुट्न पर्ने तर्क राखेका थिए।
‘जहाँसम्म मोबाइल कल डिटेलको कुरा छ। उहाँ यहाँबाट छुटेपछि टेलिकममा गएर कल डिटेल नदिनू भनेर प्रमाण नष्ट गर्नु सक्नु हुन्न। जहाँसम्म बैंकको कुरा छ, त्यहाँ गएर आफ्नो कुनै विवरण नदिनू भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। अर्को कुरा कम्पनीको छ। त्यहाँ गएर पनि कागजात नष्ट गर्ने सक्ने अवस्था रहँदैन।
जसकारण उहाँलाई सामान्य तारखेमा रिहा गर्नुपर्छ श्रीमान्,’ ज्योतिको तर्फबाट बहस गरेका वकिलले भने। त्यसपछि अर्का वकिलले सोही कुरा दोहार्‍याउँदै सामान्य तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए। त्यो बीचमा न्यायाधीशले फाइल अध्ययन गरे। त्यतिन्जेल रूपकी छोरी सुरुचिलाई खरो भइसकेको थियो। उनले एक बोतल पानि मगाइ्न र पिइन्।
फाइल अध्ययन गरिरहेका न्यायाधीशले साधे, ‘अस्पताल बस्नु भएको छ?’ ‘म होइन श्रीमान छोरी बसेको छ,’ ज्योतिले जवाफ फर्काए। त्यसपछि न्यायाधीश आचार्यले ७ दिनको म्याद माग गरिएकोमा ५ दिनको म्याद थप भएको जानकारी गराए। दास्रो पटक पनि ५ दिनको म्याद थप भएपछि बाबुछोरी मलिन अनुहार लगाएर प्रहरीको गाडी चढे।
डा. ज्योतिमाथि काठमाडौंका बृजेशकृष्ण मल्लले आफूलाई १ करोड २६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले गत कार्तिक २१ उनी र उनकी छोरीलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । यसअघि प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै ३ दिन म्याद लिइसकेको थियो ।